Diyaarado nooca dagaalka ah oo duqeymo xoogan ka geystay tuulo u dhaw deegaanka Bariire ee Sh/hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Diyaarado nooca dagaalka ah oo duqeymo xoogan ka geystay tuulo u dhaw deegaanka Bariire ee Sh/hoose
Wararka naga soo gaaraya tuulo ku dhaw deegaanka Bariire oo hoos-timaada deegaanka Awdheegle ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in diyaaradaha nooca dagaalka ah saqdii dhexe ee xalay ay duqeymo xoogan halkaasi ka geysteen.
Diyaaradahaasi oo aan la ogeyn halka laga leeyahay ayaa la xaqiijiyay inay duqeeyeen xarumo ay dagaalyahanada Al-shabaab ku leeyihiin tuuladda Yumbis oo ka tirsan deegaanka Bariire ee gobolka Sh/hoose.
Inkastoo aan la ogeyn qasaaraha ka dhashay duqeyntaasi ayaa hadane qaar ka mid ah dadka ku nool deegaankaasi waxay sheegayaan in dhowr madaafiic ay ku dhaceen saldhigyada Al-shabaab ee tuuladda Yumbis, islamarkaana ay jiraan qasaare lixaad leh oo halkaasi ka dhashay.
Ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay mas’uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan diyaaradahaan aan la aqoonin oo duqeymaha xoogan ka geystay tuulada Yumbis ee ka tirsan deegaanka Bariire ee gobolka Sh/hoose.
Dhinaca kale, saraakiisha Al-shabaab ayaan weli wax hadal ah kasoo saarin duqeymahaan la sheegay in lagu qaaday saldhigyadda ay ciidamadooda ku leeyihiin tuuladda Yumbis oo ka tirsan deegaanka Bariire islamarkaan hoos-timaada degmada Awdheegle ee gobolka Sh/hoose.